म’हिनावारी भएको बेला गाउँघरमा महिलाहरुले स्यानिटरी प्याडको सट्टा प्रयोग गर्ने पुरानो कपडा राम्रो हो कि हैन ? जान्नै पर्ने कु’रा – UPDATE LINK
म’हिनावारी भएको बेला गाउँघरमा महिलाहरुले स्यानिटरी प्याडको सट्टा प्रयोग गर्ने पुरानो कपडा राम्रो हो कि हैन ? जान्नै पर्ने कु’रा
मासिक श्रावको बेला सबैको निम्ती स्यानिटरी प्याड सहज उपलव्ध हुँदैन । खासगरी शहरी वा सुगम क्षेत्रमा सजिलै पाइएपनि कति ग्रामिण भेगमा यसको अभाव हुन्छ। हुन त स्यानिटरी प्याड सुरक्षित र आरमदायक मानिन्छ। यसको प्रयोग पनि सजिलो एवं छरितो हुन्छ। तर, जहाँ स्यानिटरी प्याडको अभाव हुन्छ, त्यहाँ पुरानो कपडा प्रयोग गर्ने गरिएको छ।
पुरानो साडी, बेडकभर आदिलाई प्याडको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। के पुरानो कपडाको प्याड प्रयोग गर्नु सहि हो त ? -पुरानो कपडाको प्याड बनाएर लगाउँदा अतिरिक्त खर्च हुँदैन। स्यानिटरी प्याड खरिद गर्ने झन्झट पनि हुँदैन। -तर, यो स्यानिटरी प्याड जति सजिले र सुरक्षित भने हुँदैन। साथै विभिन्न किसिमको संक्रमणको भय पनि रहन्छ।
-यद्यपी ढंग पु-याएर सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्ने हो भने पुरानो कपडाको प्याड बनाएर प्रयोग गर्दा कुनै हानी हुँदैन।-पुरानो कपडाको प्याड बनाएर प्रयोग गर्दा त्यसको सरसफाईमा भने ध्यान दिनुपर्छ । अलि थोरै थोरै समयमा बदलिरहनु पर्छ। -पुरानो कपडाको प्याड बनाउने हो भने सूती या कटनको कपडा सहि हुन्छ। यसले प्राइभेट अंगमा हावा आउजाउ गर्न पनि सहज हुन्छ ।
– धेरै पुरानो कपडा भने प्रयोग नगरेकै राम्रो हो । किनभने यसले तपाईलाई एलर्जी हुनसक्छ। -कपडाको प्याड धेरैबेर ओसिलो राख्नु हुँदैन। यसले संक्रमणको खतरा बढाउँछ।-यौ नाङ्ग साथै कपडाको सफाईमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ।– कपडाले बनाएको प्याडलाई साबुन, डिर्टजेन्टले राम्ररी धुनुपर्छ। र, घाममा राम्ररी सुकाएपछि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ।